किशोर नेपालको जीवन : रक्सी खाएर २४ घण्टासम्म सुतेको पनि छु - Ratopati
- | रमन पौडेल
नाति पुस्ताका पत्रकारसमेत किशोर नेपाललाई ‘किशोर दाइ’ भनी सहजै सम्बोधन गर्छन् । किशोर दाइचाहिँ धेरैलाई ‘तिमी’ वा ‘तँ’ भन्छन् ।
केही महिनाअघि एक अनलाइन अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, ‘मैले तिमी भनेँ भने दाइले टाढाको सम्झ्यो भनी रिसाउँछन् ।’
पत्रकारितामा नयाँ पुस्तासँग घुलमिल हुने अवसर किशोर नेपालबाहेक कसैलाई मिलेको छैन ।
‘किशोर दाइ’ को पत्रकारिता जति अनुकरणीय छ, जीवनशैली त्यस्तै लोभलाग्दो छ । ‘रोमान्टिक’ र ‘फ्रेन्ड्ली’ भन्नुमा सन्देह छैन । र, कठोर पनि ।
सायद दुई साताअघिको बुधवार अन्तर्वार्ताका लागि फोनमै आग्रह गरेँ, ‘दाइ तपाईंको अन्तर्वार्ता गर्नुपर्ने भयो एउटा ।’
किशोर दाइले भने, ‘गर–गर । के छ र ।’
हो । केही पनि थिएन । समय निकाल्नुपर्ने थियो । अर्को बिहान म उनलाई भेट्न गौशालानजिकैको एउटा क्याफेमा पुगेँ ।
मलाई लाग्यो, यो उनको मर्निङ वाकपछि गफिने जक्सन हो । जहाँ थिए– पत्रकार सुवास ढकाल, कवि विप्लव प्रतीक । साँघुरो कफी सपमा हल्ला होला भनी अन्तर्वार्ताका लागि अन्य ठाउँमा जाने मनस्थितिमा थिएँ म । किशोर दाइले भने, ‘ह्या केही हु्ँदैन यहीँ बस ।’
कफीसपभित्र हल्लाकै बीच रातोपाटीको नियमित स्तम्भ ‘मेरो जीवन’ का लागि गफिएँ :
दालभात तरकारी मेरो नियमित खाना हो । मन पर्नेचाहिँ जापानिज सुसी । यसमा मिसाइने सस्र्युंको रसको गन्ध नाकमा स्वाट्ट पर्दा पिरो–पिरो हुन्छ । खुबै मन पर्छ ।
यो खाना अति महँगो पनि हुन्छ । नियमित खाने मन भएर पनि सकिँदैन । नियमित त सम्झिनेमात्रै । त्यस्तै कोदाको ढिँडो र दूध असाध्यै मन पर्छ ।
मलाई कत्ति पनि मन नपर्ने खाना तयारी चाउचाउ हो । पहाड–पर्वततिर घुम्दाचाहिँ खानैपर्ने बाध्यता हुन्छ । सामान्य अवस्थामा चाउचाउ हेर्नै मन लाग्दैन ।
खाना पकाउन पनि जानेको छु । खसीको मासुका विभिन्न भेराइटी पकाउँछु । खासगरी कबाब । कतै तालिम लिएँ भने विशाल मीठो पकाउँछु । दालभात पकाउनचाहिँ अल्छि लाग्छ ।
नियमित टी–सर्ट प्यान्ट लगाउँछु । मन पर्नेचाहिँ सुट हो । मेरो कपडा नियमित सिलाउने पहिले टिमा टेलर थियो । अचेल त्यो टेलर पनि मजस्तै भयो । रिटायर्ड हुन लाग्यो ।
सुट पनि सिलाएको छैन अहिले । गत वर्ष अमेरिकामा छोराको बिहेक्रममा उसैले किनिदिएको थियो । त्यो सिलाएको भन्दा पनि ड्राफ्टमात्रै गरेको । यसबीचमा कुनै सुट किनेको छैन ।
सर्टमा भने म ब्रान्ड कन्सस छु । लुइस फिलिप, ब्रान्ड हुसेन प्रायः मैले लगाउने सर्टका ब्रान्ड हुन् । प्यान्टमा त ब्रान्ड नै मिल्दैन । किनकि म पुड्को छु । फिट हुँदैन । त्यस्तै, रातो वा नीलो मलाई मनपर्ने कलर हुन् ।
पोखरामा म धेरै इन्ज्वाई गर्छु । पर्यटकीय सहरभन्दा पनि प्राकृतिक सहरका रूपमा हेर्छु पोखरालाई । त्यहाँ साथी खोज्नु पनि पर्दैन । साथीभाइ भेट्नै गए पनि ठिकै छ । आफैँ हराऊँ भनेर गए पनि हुने । त्यो मजाको ठाउँ छ । त्यहाँ चिन्ने मान्छे त हुन्छन् । तर, हराउन सकिन्छ ।
घुमिराखेको छु । कति ठाउँ पुगेँ याद नै छैन । ७५ जिल्ला, झन्डै १२ सय गाउँ घुमेँ । विदेशमा अफ्रिका, रूस, चीन, अमेरिका, बेलायत, स्वीट्जरल्यान्डलगायत दुई दर्जन बढी देश पुगेँ ।
साह्रै राम्रो ठाउँ नेपाल । हाललाई यही बत्तीसपुतली राम्रो । जहाँ म छु । (लामो हाँसो )।
घुम्नका लागि कुनै योजना बनाउने बानी छैन मेरो । तर, घुमिराखेकै हुन्छु । एकदम जान मन लागेको तर जान नपाएको देश अस्ट्रेलिया ।
अहिले त फुर्सदै फुर्सद छ । हप्ताको तीनवटा आर्टिकल लेख्छु । इन्टरभ्यु गर्छु । सुवास ढकालले एउटा काम दिएको छ, सेलिब्रिटीको इन्टरभ्यु गर्ने । त्यो गर्दै छु अहिले ।
पहिलोपोस्ट र कान्तिपुरमा नियमित लेख्दै छु । किताब लेख्छु । फुर्सद नै छ ।
विकेन्ड मनाउने कुनै योजना हुँदैन । जहिले मन लाग्यो त्यहीले विकेन्ड । आज रमाइलो गर्न मन लाग्यो, भरे साथीभाइसँग बस्न मन लाग्यो, फोन गर्यो, पैसा छ कि छैन बुझ्यो गयो ।
हरेक बिहान पाँच बजेतिर उठिसक्छु । कफी पिउँछु । एकछिन जिउ तन्काउने अनि मर्निङवाकमा निस्किने ।
आधा घन्टा मच्चिएर हिँड्छु । बाँकी आधा घन्टाजति बिस्तारै । नियमितको खाना चिल्लो हुँदैन । यसैले पनि फिट नै छु म ।
कहिलेकाहीँ पेट दुख्ने, ज्वरो आउनेबाहेक स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या छैन । तर, प्रेसरको औषधि सेवन गर्दै आएको छु । अहिले यो पनि सन्तुलित छ ।
जेलमा बस्दा चेस खेलिन्थ्यो । पछि पनि साथीहरूसँग खेलियो । खेलमा खासै लगाव छैन मेरो । हेर्दा रमाइलो लाग्ने फुटबल नै हो । फेभरेट देश वा क्लब केही छैन । अचेल रोनाल्डो, मेस्सी भन्छन् । हाम्रो पालामा पेले थियो । कहिलेकाहीँ क्रिकेट पनि हेर्छु । तर, नबुझ्दा रमाइलो हुँदो रहेनछ ।
हरिभक्त कटुवालले लेखेका अधिकांश गीत मन पर्छन् । त्यस्तै कालीप्रसाद रिजाल, भीम विराग, विप्लव प्रतीकका गीत पनि मन पर्छ ।
यस्तै, रकपप स्टाइलमा योगेश्वर अमात्य पनि मन पर्छ । म बाथरुम सिंगर हुँ । एक–एक टुक्रा सबै गीतको आउँछ । किशोर कुमार, गुलाम अली, जगजित सिंहका आवाज मन पर्छ । ‘हम भी सरावी, तुम भी सरावी’ गजल मलाई खुब मनपर्छ ।
पछिल्लोपटक हलमै गएर हेरेको सिनेमा ‘हैदर’ हो । खगेन्द्र दाइ (खगेन्द्र संग्रौला) र म गएका थियौँ । खुब राम्रो लाग्यो ।
मन पर्ने कुरा पनि उमेरसँगै हुँदोरहेछ । एक समय ‘आनन्द’ खुब मन पथ्र्यो, १७/१८ पटक हेरेँ होला । एक समय ‘गाइड’ मन पथ्र्यो । अलटाइम मन पर्ने राज कपुरको, ‘मेरा नाम जोकर’ । त्यस्तै ‘तिस्री कसम’ पनि खुब राम्रो लाग्छ ।
अहिले पनि ती फिल्म मिस गर्छु । हैदर हेरेपछि त्यसको स्वाद मेटिएला भन्ने चिन्ता छ । हैदरको स्वाद जोगाएर राख्नु छ । फिल्म हेर्दा रुने बानी छैन मेरो । प्रेमिकासँग पनि जानुहुँदैन । पहिले पनि जान्नथेँ । प्रेमिकासँग डर लाग्छ । घरमा कम्प्युटर वा मोबाइलमा हेर्न मन लाग्दैन ।
सिनेमा हेर्ने ड्याङ्ग हलमै बसेर हो । फिल्म हेर्न जानका लागि पनि मन मिल्ने साथी हुनुपर्छ ।
पहिलोपटक कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रेस सल्लाहकार छँदा नोकियाको सानो मोबाइल लिएको थिएँ ।
सिनेन्सको सानो मोबाइलदेखि आइफोन पनि लिएँ । अहिले सामसुङ र माईक्रोसफ्ट दुई चलाउँछु । मोबाइल फटाइनँ मैले, चलाउने–चलाउने अनि साथीहरूलाई दिने । अहिलेसम्म आठ÷दसवटा मोबाइल चलाएँ होला ।
तीमध्ये धेरै गिफ्टबाटै आए । सामसुङको नोट फाइभ अमेरिकन साथीले क्रिसमस गिफ्ट दिएको हो । माइक्रोसफ्ट १७ हजारमा आफैँ किनेको ।
मोबाइलमा केही आवश्यक एप्समात्रै चलाउँछु । फेसबुक, ट्वीटर, इमेल । पहिले क्यान्डी क्रस गेमको लत लागेको थियो । अहिले छैन ।
विचार र लजिक भएका किताब पढ्न रुचाउँछु । अल्बर्ट क्यामु, ज्या पाल सात्र्र, काफ्कालगायतका किताब धेरै मन पर्छ । हारुकी मुराकामी, मिलन कोन्देरा पनि मेरा मन पर्ने लेखक हुन् ।
मैले कमाएर त केही गरिनँ । मेरा बाबुले किनिदिएको जग्गा बेचेर २०३८ मा घर बनाएँ । खर्च कति लाग्यो याद भएन । बत्तीसपुतलीमा साढे तीन रोपनी जग्गा थियो । त्यही बेचेँ, जति पैसा आयो त्यसमै घर बनाएँ । स्थायी सम्पत्ति केही छैन मेरो ।
पछिल्लो चार वर्षदेखि आइटेन गाडी छ मसँग । हिमालयन बैंकको लोन सुविधामा अब पाँच लाख तिर्न बाँकी छ । यसभन्दा अघि स्यान्ट्रो थियो । मार्सल जिप पनि चढेँ आफैँले किनेर ।
सरकारी, कर्पोरेसनको पनि चढेँ । सरकारी, कर्पोरेसनको गाडी चढ्नुहुँदैन, जागिर पनि खानुहुँदैन भनेर अहिले आफैँ किनेको ।
मिलेसम्म सबै पुस्तक पढ्न खोज्छु । तर, मेरो रुचि लिटरेचरमा छ । अलि गम्भीरकिसिमको पुस्तक छ भने पढ्छु । किताब पढेर आँशु नै आयो भन्नेखालका किताब पढ्दिनँ ।
नेपालीमा पछिल्लो समयमा उल्लेखनीय किताब पाएको छैन । पहिले मोहन कोइरालाका कविता, भूपी दाइका कविता पढियो । पोषण पाण्डेका कथा, कृष्णभक्त श्रेष्ठका कविता पढियो । विजय मल्लका उपन्यास, धनुषचन्द्र गौतम, ध्रुवचन्द्र गौतम, गोविन्द गोठालेका पनि ।
(केही नायिकासँग पनि उनको नाम जोडेर चिया पसलमा मसला बनाइए । दाइ वर्षौंदेखि तपाईंको प्रेम किस्सा सुनिएको छ, योङएजमा के–कस्तो भयो ? पहिलो प्रेम कस्तो थियो भनेर सोधेँ ।)
पहिलो प्रेम कुन थियो भन्ने नै थाहा छैन मलाई । स्कुलमा पढ्दा हो कि, किशोरावस्थाको हो कि । यसमा समस्या हुन्छ । कुनलाई पहिलो प्रेम भन्ने । छुट्याउनै गाह्रो ।
म समानान्तर काम गर्ने मान्छे । साप्ताहिकमा सेलिब्रिटीको इन्टरभ्यु गर्छु । पहिलोपोस्टमा कान्तिपुरगाथा लेख्छु । कान्तिपुरमा राजनीतिक टिप्पणी गर्छु । र, किताब पनि लेख्छु ।
यस्तै भयो मेरो प्रेममा पनि । समानान्तर काम गर्दा कुन पहिले गरेँ छुट्याउनै गाह्रो ।
जीवन पनि समानान्तर हिसाबले नै चल्ने रहेछ । मैले अंग्रेजी पढ्दापढ्दै संस्कृत पढेको ।
प्रेमसम्बन्ध पनि सम्झिएर साध्य हुन्छ यार । (हाँस्दै ) अहिलेको जस्तो हेलो, हाइ हुँदैनथ्यो । छेको लगाएर लुकेर गफ गर्नुपथ्र्यो । हाम्रो पालामा कठिन थियो । अहिले तिमीहरूको पालाको जस्तो छैन ।
तर, मैले केटीहरूसँग प्रेमको हिसाबले, शारीरिक सम्बन्धको हिसाबले कहिल्यै संगत गरिनँ । केटीलाई हामीजस्तै साथीका रूपमा हेरेँ । तिनीहरूसँग रोमान्टिक कुरा गर्नेबित्तिकै तिनीहरू प्रेमिका नै हुन् भन्नु गलत हो । कहिलेकाहीँ दरबारमार्गमा अभिनेत्री, लेखिका, गायिकासँग अँगालो मारेर हिँड्छु । यसले के हुन्छ त । केही हुँदैन ।
हरेक मान्छेको सहअस्तित्वप्रति मर्यादा छ भने तपाईं जे गरेर हिँडे पनि हुन्छ । योङ एजमा केही अफेक्सन भए पनि बिर्सिएँ मैले । तिनीहरू फोन पनि गर्छन् । उनीहरूले धान्न सकेनन् । मैले धान्न चाहिनँ । कति थिए, गनिएन । गिनिजबुकमा नाम लेखाउनु थिएन मलाई ।
सनातन हिन्दु धर्मअनुसार विवाह भयो । परिवार र मेरो रुचिमै भएको हो । मेरो पारिवारिक जीवन मेरो श्रीमतीका कारण सुखद छ ।
अहिलेसम्म उसले मलाई आवारागिरी गर्न नछाडिदिएको भए, पत्रकारिता गर्न नछाडिदिएको भए, डिमान्ड धेरै गरिदिएको भए म कहीँ पनि हुँदैनथेँ । तपाईं यसरी अन्तर्वार्ता लिनै आउनुहुँदैनथ्यो ।
मेरो भूल केही छैन । काम गर्दै जाँदा कतै असफल भइयो । त्यसलाई भूल भन्दिनँ । कुनै पाप गरेजस्तो किसिमको भूल गरेको छैन । सम्झिनुपर्ने भूल पनि छैनन् । गर्नुपर्ने प्रायश्चित पनि छैनन् ।
(तपाईंको आलोचना त भयो नि ?)
मान्छेले टिप्पणी त गरे होलान् । एकताका मैले राम्रो लुगा लगाए पनि टिप्पणी गर्थे । ब्ल्याक लेबल ह्वीस्की खाए पनि टिप्पणी गर्थे ।
हामी झोला बोकेर हिँड्ने पत्रकार यो कसरी यस्तो बनेर हिँड्छ भन्थे । त्यो त आफूले मार्केट बनाउने कुरा हो । आफ्नो डिमान्ड क्रिएट गर्नुपर्छ । पत्रकार भएर पार्टीको काम गर्ने होइन । पार्टीका नेतासँग समान सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।
प्रचण्डजी, शेरबहादुरजी, ओलीजी, झलनाथजी, माधवजीसँग पनि उस्तै सम्बन्ध छ मेरो । भन्नेले यो माओवादी भयो । यो कांग्रेस भयो भन्छन् । म न माओवादी, न कांग्रेस, न एमाले । मान्छेलाई लेभलिङ गर्छन् यहाँ । यस्तो कच्चा दिमाग भएको देशमा हामी सर्भाइब गरेका छौँ, यही नै ठूलो कुरा ।
अनि रेडलेबलमा उक्लियो । यसले मात्रै पनि टाउको दुख्दोरहेछ भनेर ब्ल्याक लेबलमा उक्लियो । यो मीठो लाग्यो यही खान लागियो । ब्ल्याक लेबलभन्दा माथि जान पनि मन लाग्दैन, तल आउन पनि मन लाग्दैन । पाइएन भने खाँदै नखाने, पाएसम्म ब्ल्याक लेबल नै खाने ।
सकेसम्म राम्रो भएर हिँड्नुपर्छ । बुढेसकालमा पनि म राम्रो छु भन्ने लाग्छ । तपाईंहरू आउनुहुन्छ, इन्टरभ्यु लिनुहुन्छ । फोटोजेनिक छ मेरो फेस । टेलिभिजनमा पनि चल्छ ।
(दाइ, तपाई्रंको मदिरा किस्सा त दुई दिनसम्म पनि सकिँदैन । मदिरासँग तपाईंको कस्तो साइनो हो ? भनी सोधेँ ।)
मदिरासँग एकदम गम्भीर, संवेदनशील साइनो छ । सुरुमा घरमा बनाएको रक्सी खान सिकियो साथीहरूसँग मिलेर । बिस्तारै रस बस्यो । रस बसेपछि तल्लो तहका झासेझुसे रक्सीभन्दा अलि माथिल्लो खानुपर्छ भन्ने लाग्यो । खानलाई कमाउनुपर्यो । कमाउन पनि थालियो ।
रक्सी खाएर २४ घन्टासम्म सुतेको पनि छु । रक्सी खाएर बेहोश भएको पनि छु । तर, रक्सी खाएर झगडाचाहिँ गर्दिनँ । बरु खाएपछि इम्पोज गर्ने बानी छ । यस्तो मेरो स्वाभाविक जीवनमा पनि छ । होडबाजीजस्तो चल्दोरहेछ । तर, अचेल अरूको पनि कुरा सुन्न थालेको छु ।
एकै बसाइमा डेढ बोतल ब्ल्याक लेबलसमेत सिध्याएको छु साथीसँग । एक्लै त रक्सी नै खान्न । मेरो सिग्रेटको विषयचाहिँ बिस्तारै कथा हुँदै छ । म मार्लबोरो चुरोट खान्थेँ पहिले । मेरो ब्रान्ड नै मार्लबोरो हो । उमेर ढल्किँदै गएपछि कम गर्नुपर्छ भनेर डाक्टरले पनि सल्लाह दिएकाले अलि कम गरेको छु ।
मिथुन राशि मेरो । ग्रहदशा वा ग्रहशान्ति केहीमा पनि विश्वास लाग्दैन मलाई ।
ग्रहदशा भनेको आफैँ बनाउने हो । ज्योतिषीले भनेर मेरो भाग्य बन्ने कत्ति पनि विश्वास छैन । मेरो भाग्य म आफैँले बनाउँदै आएको हुँ । भाग्यको निर्माण आफैँ गर्ने हो । मेहेनत, संघर्ष गर्नुस् आफैँ बन्दै जान्छ ।
(नेताहरूसँगको सम्बन्धलाई लिएर किशोर दाइबारे अनेक टिप्पणी भए । कहिले किसुनजी, कहिले शेरबहादुर देउवा । प्रचण्डसँग अति निकट भनी नाम जोडियो । यसबाहेक केही राजनीतिक नियुक्ति पनि ।)
म डेमोक्रेटिक मान्छे हुँ । हार्डकोर डेमोक्रेट । यसमा कुनै शंकै छैन । दुनियाँले जेसुकै भने पनि पछिल्लो समयमा हिंसात्मक आन्दोलनलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन मेरो पनि भुमिका रह्यो ।
दुई÷तीन वर्षसम्म जिल्ला–जिल्ला घुमेर दुई बन्दुकले चेपिएका मानिसका वेदना मैले बाहिर ल्याएँ । शान्तिप्रक्रियामा पनि मैले आफूले जे गर्न सक्थेँ त्यो गरेँ ।
गोरखापत्रलाई रंगीन बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको थियो । रंगीन बनाएर देखाएँ । अहिलेको रंगीन गोरखापत्र मेरै देन हो । खासमा म काम गर्न गएको थिएँ । आफ्नै पेसामा फर्कें ।
यहीक्रममा प्रचण्डजी, बाबुरामजीसँग नजिक भएँ । पछि आएर फेरि आफ्नै पेसामा क्रियाशील छु । मेरो पेसालाई व्यक्तिगत राजनीतिक झुकाव वा नियुक्तिले पनि असर कहिल्यै पारेन । राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा किसुनजीले मलाई संरक्षण दिनुभएको थियो ।
उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि प्रेस सल्लाहकार बनाउनुभयो । पछि शेरबहादुर देउबाले टेलिभिजनको अध्यक्ष, गोरखापत्रको प्रधानसम्पादक बनाउनुभयो । टेलिभिजनलाई चलाउनु थियो । काम गरेर देखाएँ ।
मलाई एकदमै मन पर्ने तीन नेता जो जीवित छैनन् । बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी । वर्तमानका नेतामा मलाई सबै मन पर्छ ।
प्रचण्डजी पनि मन पर्नुहुन्छ किनकि उहाँसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ । शेरबहादुरजी पनि मन पर्छ । किनकि म उहाँलाई दाइ भन्छु । उहाँसँग नजिक छु । ढाँट्दिनँ । शेखर कोइराला पनि मन पर्छन् । पढेलेखेका कांग्रेसी बुद्धिजीवी छन् ।
बाबुरामजी पनि रमाइला मान्छे छन् । उनको नयाँ शक्ति के हुन्छ त थाहा छैन । एउटा आकांक्षा लिएर हिँडेका मान्छे हुन् । राम्रा छन् ।
झलनाथजी मनपर्छ एमालेमा । किनकि डरम्यानको सुट लगाउनुहुन्छ, खानपिनमा सोखिन हुनुहुन्छ । म पनि सोखिन छु ।
(मृत्युको भय वा कृत्यबारे कहिल्यै सोच्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्दा यसो भन्छन् ।)
मृत्युबारे खासै सोच्दिनँ । तर, कसरी मरिन्छ । कहाँ मरिन्छ । मरिसकेपछि के मतलब यार । म मरिसकेपछि तपाईंले मेरो समवेदना कति लामो, ठूलो छाप्नुहुन्छ भन्ने कुरा मतलब भएन ।
साथीहरूले शोकसभा गरेर मेरो कति भजन गाउँछन् त्यो पनि मतलब भएन । यसबारे चिन्ता छैन ।
सपना छैन भनेर झुटो बोल्नुहुँदैन । तर, अहिले ठ्याक्कै योचाहिँ काम गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर मैले फेलापार्न सकेको पनि छैन । किनकि चाहेका सबै काम गर्न पाइराखेको छु ।
यी जीवन कथा पनि पढ्नुहोस